Tantara: Ny Loza 10 - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
JEREO ny sary. Mampiseho loza izay nalefan’i Jehovah tamin’i Ejipta ny tsirairay aminy. Eo am-pikapohana ny Ony Neily amin’ny tehiny i Arona eo amin’ny sary voalohany. Dia niova ho ra ny rano tao amin’ny ony. Maty ny hazandrano, ary nanomboka namofona ny ony.
Taorian’izay dia nakarin’i Jehovah avy tao amin’ny Ony Neily ny sahona. Hita hatraiza hatraiza izany—tao amin’ny fanaova-mofo, ny vilany, teny amin’ny farafaran’olona—hatraiza hatraiza. Rehefa maty ny sahona, dia nataon’ny Ejipsianina antontany lehibe izany, ary maimbo ny tany noho ireny.
Avy eo i Arona dia nikapoka ny tany tamin’ny tehiny, ary niova ho moka ny vovoka. Bibikely manidina manaikitra ireny. Ny moka no loza fahatelo teo amin’ny tany Ejipta.
Ny sisa amin’ny loza dia namely ny Ejipsianina irery ihany, fa tsy ny Israelita. Ny loza fahefatra dia lalitra vaventy izay nameno ny tranon’ny Ejipsianina rehetra. Ny loza fahadimy dia tamin’ny biby. Biby ﬁompy sy ondry ary osy maro an’ny Ejipsianina no maty.
Manaraka izany, i Mosesy sy Arona dia naka lavenona ary nanipy izany teny amin’ny rivotra. Niteraka vay ratsy teo amin’ny olona sy ny biby izany. Io no loza fahenina.
Taorian’izany i Mosesy dia naninjitra ny tanany tamin’ny lanitra ary nandefa varatra sy havandra i Jehovah. Izany no havandra sy orambaratra ratsy indrindra namely an’i Ejipta hatramin’izay.
Ny loza fahavalo dia andiam-balala be dia be. Mbola tsy nisy valala maro be toy izany mihitsy talohan’izay na taoriana. Nihinana izay rehetra tsy nosimban’ny havandra izy ireny.
Ny loza fahasivy dia ny aizim-pito. Nandrakotra ny tany nandritra ny telo andro ny aizim-pito matevina, nefa dia nanana hazavana ny Israelita tao amin’izay nitoerany.
Farany, dia nilazan’Andriamanitra ny olony mba hamafy ran-janak’osy na ran-janak’ondry teo amin’ny tolàm-baravarana. Avy eo dia namakivaky an’i Ejipta ny anjelin’Andriamanitra. Rehefa hitan’ilay anjely ny ra, dia tsy namono na iza na iza tao amin’izany trano izany izy. Fa tao amin’ny trano rehetra izay tsy nahitana ra teo amin’ny tolàm-baravarana kosa, ilay anjelin’Andriamanitra dia namono ny voalohan-teraka tamin’ny olona sy ny biby. Izany no loza fahafolo.
Taorian’io loza farany io dia nilazan’i Farao ny Israelita mba handeha. Vonona ny handeha avokoa ny olon’Andriamanitra, ary tamin’io alina io ihany dia nanomboka ny diany niala tany Ejipta izy.
Eksodosy toko faha-7 ka hatramin’ny faha-12.
Lazalazao ny loza fahaﬁto, sy fahavalo ary fahasivy.
Vakio ny Eksodosy 7:19-8:23.
Nahavita zavatra nitovy tamin’ireo loza roa voalohany nalefan’i Jehovah koa ny ombiasy tany Ejipta. Inona anefa no voatery neken’izy ireo taorian’ilay loza fahatelo? (Eks. 8:18, 19; Matio 12:24-28)
Porofoy fa vitan’i Jehovah ny miaro ny vahoakany, araka ny hita tamin’ilay loza fahefatra. Noho izany, dia inona no tsapan’ny vahoakan’Andriamanitra rehefa hiatrika ilay “fahoriana lehibe” ho avy izy ireo? (Eks. 8:22, 23; Apok. 7:13, 14; 2 Tant. 16:9)
Vakio ny Eksodosy 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; sy 10:13-15, 21-23.
Voala sarona i Farao sy ny ombiasy rehefa nalefa ny Loza Folo. Mifanitsy amin’iza izy ireo ankehitriny, ary tsy antenaintsika hahavita inona koa izy ireo? (Eks. 8:10, 18, 19; 9:14)